Imitya yeNylon yeApple Watch engaphantsi kwe- $ 20 | IPhone iindaba
Imitya yeNylon yeApple Watch engaphantsi kwe-20 euros
Iindaba ze-IPad | | Apple Watch
Nabani na ophethe iApple Watch uya kuba sele eqondile ukuba ilizwe elimnandi nelikhobokisayo liyavula: imitya yewotshi yakho. Izinto ezahlukeneyo zemibala, imibala, uyilo kunye namaxabiso esinawo kwiVenkile yeApple kugqitywa kuphela luhlobo esinalo kwezinye iivenkile ezinje ngeAmazon, apho ngamanye amaxesha sinokufumana ezinye iindlela ezizezona zintle zemigca egcina umgangatho Ixabiso eliqinileyo kune-Apple. Emva kokukhangela okuninzi ndifumene imitya ebonakala iphantse yafana ncam nemitya yeNylon ye-Apple eboshwe kwaye inexabiso elinomtsalane ngakumbi: € 19,99. Kwimeko apho unomdla, nazi amakhonkco eAmazon Spain aneendleko zokuhambisa simahla.
Imitya evela kuhlobo lwe-MIMO, kwaye nangona bengenayo iPremiyamu yeAmazon, ukuhanjiswa kwabo kusimahla. Ewe kunjalo, bavela e-China ke kungathatha iiveki ezimbini ukufika emva kokuba ubeke iodolo yakho. Ngokuchasene nezinye izinto ezinikezelwayo, ezi ntambo zilinganisa ngokugqibeleleyo ezo zeApple, kuba sisincamathiselo sokubukela ngokufanayo nakwasekuqaleni, ayifani nezinye ezinendawo yokubopha yentsimbi yezinye iimodeli. Ifumaneka kuzo zombini ii-Apple Watch size kunye nayo yonke imibala yentsusa yeebhendi, unokukhetha iibhanti zokuqokelela kwakho kwaye uza kube ugcina imali ngaphezulu koqobo.
Ibhendi yeApple yokujonga, iMIMO® ukukhutshwa kweZemidlalo kwiRoyal Woven Nylon Bracelet Strap Band yeApple Watch (38mm)
Okwangoku sele ndayalela le uyibonayo emfanekisweni wokuqokelela kwam, ngombala oluhlaza waselwandle. Ndiza kukuxelela ukubonakala kwam xa ndifika ekhaya, kwaye ndiza kulihlaziya eli nqaku kunye neefoto zokwenene zomtya, kwaye ndiza kukuxelela ukuba bayayifumana na imihla ebekiweyo yokuhanjiswa. Nge- € 19,99 kubandakanya ukuhambisa, kunzima ukumelana nokuzama umtya ebendifuna ukuwuthenga kuApple ixesha elide, kwaye ngoku izakundibhatala isithathu sexabiso.
Ewe, isithembiso sifuneka, kwaye ndifumene nje umtya wam. Imvakalelo ilungile, intofontofo nangona okokuqala uyibeka kuyo ingqongqo kakhulu. Ukuchukumisa kulungile, umbala njengoko bendilindele ukuba ungabikho wokukwazi ukuwujonga ngentambo yoqobo, kwaye ndonwabile ngokuthenga. Ewe kunjalo, ukwaluka kwenayiloni kunesiphene esincinci endithandabuzayo ukuba kwenzeka kakhulu kwi-Apple yoqobo. Kodwa into endiyithethileyo, ndonwabile ngokuthenga. Ndikushiya negalari enemifanekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Imitya yeNylon yeApple Watch engaphantsi kwe-20 euros
UAlejandro Luengo sitsho
Andiziboni izixhumanisi, ziphi?
Phendula u-Alejandro Luengo
Apha ngezantsi nje komfanekiso wewotshi onomtya onekhonkco kunye neqhosha oza kulithenga kwiAmazon
Andifumani makhonkco ... 🙁
Ukuqwalaselwa ngaphambi kokwehliswa ukusuka kwi-iOS 10